Ungaseta njani iintlobo zeSaziso kwi-iPhone yakho
Iziko lezaziso luluhlu lwezaziso ezahlukeneyo kunye neziganeko ezicwangcisiweyo; ikwabonelela ngolwazi (olufana nezicatshulwa zesitokhwe) onokuthi uzibonakalise ngokuswayipha ezantsi ukusuka phezulu kwiscreen se-iPhone yakho. Iziko leSaziso le-iPhone livulwe ngokungagqibekanga, kodwa akufuneki ubandakanye lonke uhlobo lwesaziso apho ukuba awufuni. Umzekelo, ngekhe ufune ukwaziswa ngemiyalezo engenayo kodwa uhlala ufuna ukuba nezikhumbuzo ezidweliswe apha- kuxhomekeke kuwe. Olunye useto lweZiko leSaziso likuvumela ukuba ulawule ukuba zeziphi iintlobo zezaziso ezifakiwe:
Cofa Useto uze ucofe Izaziso.
Kwiseto esivelayo, ubona uluhlu lwezinto eziza kubandakanywa kwiZiko leSaziso.
Ungayijonga imeko yento ngokuyifunda ngokuthe ngqo phantsi kwegama lento leyo. Umzekelo, phantsi kweAccuweather, ufunda iiBanners, Izandi, iiBheji, ezibonisa iindlela zezaziso ezenziweyo zenzelwe loo app.
Thepha nayiphi na into.
Kwiseto esivelayo, setha into yokuVumela iZaziso ukuba zitshintshele kwi-On okanye kwi-Off, ukuyifaka okanye ukuyikhupha kwiziko leZaziso.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-ortho tri cyclin
Kwicandelo lezilumkiso, khetha ukubonisa izilumkiso kwiScreen Lock, iZiko leSaziso, njengeeBanners, okanye indibaniselwano enye okanye ezingaphezulu.
Unokuthatha isigqibo sokuba kungabikho zilumkiso zivelayo xa kungekho nto ihlolwe kwicandelo lezilumkiso.
Ukuba uvumela iiBanners, khetha isitayile ngokuthepha isitayile seBanner. Izitshisi ziya kuvela emva koko zinyamalale ngokuzenzekelayo ukuba ucofa isitayile sethutyana. Ukuba ukhetha uQhubeka, kuya kufuneka uthathe inyathelo lokugxotha isilumkiso xa sivela (njengokuyiswayipha ukuze usigxothe okanye ucofe ukusijonga). Cinezela iqhosha lokubuya ngasemva ngasekhohlo ukuze ubuyele kwiscreen esidlulileyo.
Ukuguqula izandi kunye neebheji zivula okanye zivaliwe ukuze zilungele incasa yakho.
Cinezela uBoniso lokuQala ukujonga ukuba uza kuqala nini okanye ukuba ukubonwa kwangaphambili kwezaziso kufuneka kuboniswe kwiscreen se-iPhone yakho.
Izinketho zibandakanya Soloko (okungagqibekanga), xa ivuliwe (ukubonwa kuqala kuvela kuphela xa i-iPhone yakho ivuliwe), okanye ungaze. Cofa umva ukuya kwiscreen esidlulileyo.
Khetha ukhetho lwamaQela eSaziso.
Eli nqaku lulongezo olwamkelekileyo kwi-iOS 12. Inqaku likuvumela ukuba uqokelele izaziso ukuba uyafuna, ezinokugcina izinto zicoceke kakhulu, ngokuchaseneyo nokubona zonke izaziso ezidwelisiweyo. Izinketho zibandakanya
Zenzekelayo Izaziso zihlelwe ngokwamaqela e-app, kodwa zinokuhlelwa ngokwendlela ezahlukeneyo. Umzekelo, unokubona ngaphezulu kwelinye iqela lemeyile ukuba ufumana ii-imeyile ezininzi kumntu; ezo zaziso ze-imeyile zinokufanelekela ngokwamaqela abo.
Ngu-App Izaziso zihlelwe ngokwamaxesha abo okuvela kwi-app. Uza kubona iqela elinye kuphela losetyenziso, hayi amaqela amaninzi ngokusekwe kwiindlela ezahlukeneyo, njengoko kuchaziwe kuseto oluzenzekelayo.
Cimile Zonke izaziso zale app ziya kudweliswa ngokukodwa.
Cofa umva iqhosha ukubuyela kwiscreen esidlulileyo.
Thepha Izaziso kwikona ephezulu ngasekhohlo ukuze ubuyele kwiscreen esona sicwangciso sezaziso.
Xa ugqibile ukwenza useto, cinezela iqhosha laseKhaya okanye uswayiphele phezulu ezantsi kwesikrini (iimodeli ze-iPhone X kuphela).
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-ropinirole
bhala uphononongo kwi-yelp
cyclobenzaprine ithatha ixesha elingakanani
I-diazepam 5mg vs xanax
yintoni i-calcium citrate
alkaseltzer kunye nokubanda kunye nokukhohlela